Accueil > Gazetin'ny nosy > Rivo Rakotovao : Mandrahona sahady
Rivo Rakotovao : Mandrahona sahady
Nandritra ny fanendreny ny mpisolo toerana azy vonjy maika hisahana ny asan’ny filohan’ny Antenimierandoholona Ingahy Rivo Rakotovao, filoham-panjkakana mpisolo toerana vonjy maika, omaly, dia nampiaka-peo sahady teo anoloan’ny mpanao gazety. Avy hatrany izy dia nilaza hoe “tsy afaka hanaiky na handefitra amin’ny asa fanakorontanaa ny fitondram-panjakana, ary aza hadinoina fa misy fanjakana eto. Tsy azon’ny pôlitika hatao ampihimamba ny fiainam-pirenena, ka tsy handefitra amin’izay mihevitra ny hanakorontana ny fanjakana”.
Iza moa no tian’Ingahy Rivo Rakotovao hambara fa mitetika hanakorontana eto e ? Sao sanatria ka misy olona efa tetehina hokapain-doha sahady any ho any ka omanina ny sain’ny vahoaka dia hampiharina ny fanapahan-doha an’ilay olona manahiran-tsaina azy, dia hambara avy eo hoe “hitanareo, efa nampitandrina izahay, ka tsy maintsy mandray fepetra”.
Ny ho akon’iny tenin’Ingahy Rakotovao Rivo iny izao dia na iray hipirimpirina avokoa ny mpanao pôlitika na hijoro handrefy an’iny teny iny.
Etsy ankilany anefa, araka ny fanamarihin’i Monja Roindefo tamin’ny alatsinainy teo momba ny fanambaran’ny Amiraly Ratsiraka hoe “misy fampidirana antsokosoko fitaovam-piadiana mahery vaika eto”, dia toa tsy hita akory izay fepetra mba noraisin’ny fanjakana nambaran’i Rivo Rakotovao fa “misy eto” ? Raha ny tokony ho izy mantsy, satria tsy olonolom-poana ny Amiraly Ratsiraka nilaza an’iny vaovao iny, dia tokony ho niolo-may ny mpitondra fanjakana nampanao fanadihadiana haingana ary nanome antoka ny vahoaka. Hatreto anefa dia tsy hita izay fepetra noraisin’ny mpitondra. Nahoana koa raha milaza ampahibemaso ny mpitondra fanjakana fa “mandainga sy manely tsaho ary mampisavorovoro ny saim-bahoaka fotsiny ny Amiraly Ratsiraka”, dia andraisana fepetra mifanandrify amin’izany ?
Ny tsy azo hamaivanina koa aloha dia i Rivo Rakotovao no voalohany nanao hazalambo ny mpanao gazety teto. Niaraka tamin’i Henry Rabary Njaka izy tamin’izany, ary izahay eto amin’ny La Gazette de la Grande Ile dia isan’ny efa niantefan’ny fikasan-dratsin-dry zalahy hosamborina.
Marina fa tsy misy famonjana intsony ny lalàna ankehitriny amin’ny heloka an-gazety, saingy mbola mialohalo any ny sazy ara-bola (lamandy) izay mavesatra dia mavesatra, ka ny tetiky ny olona toa an-dry Rivo Rakotovao, dia ny hanakatona mihitsy ny orin’asa fanaovan-gazety manelingelina azy sy mikitikitika ny tombontsoany manokana. Re mantsy fa efa any anaty lisitra maintin’i Rivo Rakotovao ny orin’asa La Gazette de la Grande Ile.Izao moa ingahirainy dia handeha hirehareha sy hizahozaho any amin’ny fivoriambe isan-taonan’ny Firenena Mikambana any New York, satria filohampanjakana mpisolo toerana vonjy maika. Impiry ho filohampanjakana tokoa moa, ary tsy indroa hiazo izany fivorian’ny Firenena Mikambnana izany.